Shiinaha MY soo saarayaasha soo saarayaasha magnetic iyo alaabada | bame damei kingmech
Cabir: DN25 ~ DN300
Awoodda: ~ 800m3 / h
Madaxa: ~ 300m
Heerkulka: in ka yar 120 ℃
Cadaadis: 2.5 ~ 10MPa
Awooda: ~ 280kW
1.Lam dhaadheer oo bamka quusa
Qoto dheerida biyaha ee ugu hooseeya waa 7m.
Bambooyin dareere ah oo khatar ah ayaa lagu qalabeyn doonaa qolof labalaab ah, Waxay noqon doontaa qaylo-dhaan markii qolofkii ugu horreeyay ee xamaasadu leysay.
Usheeda wadista 4.Waxaa lagu taageeray by sita rogista, dhalista rogista waa saliidda saliidda; mashiinka mashiinka waxaa lagu taageeray by saarista slid Haydarooliga, dhalista saraysa waxaa saliidaynaysa dareeraha mashiinka mashiinka.
5.Magnetic pump wuxuu ku guuleysan karaa taas la'aan la'aan, waa''s ku habboon in lagu wareejiyo wasakhda, sunta, ololka, waxyaabaha qarxa, qaaliga ah ama dareeraha gaaska fudud. Intaa waxaa dheer, bamka magnetic-ka sidoo kale wuxuu ku habboon yahay gudbinta heerkulka sare, dareeraha heerkulka hooseeya iyo dareeraha ku jira xaaladda faakiyuukha.
7.Waxaa jira isbadal sita bamka magnetic, sidaas darteed''s ku habboon in si joogto ah loo shaqeeyo. Iskuday inaad iska ilaaliso waqtiyada sheegida, badiyaa kama badnaan 10times saacaddii. Markaa waxay yareyn kartaa xoqida si ay u siibato inta lagu gudajiro bilowga iyo joogsiga, waxayna sii dheereyneysaa shaqadeeda.
8.Booraha magnetic-ka ee heerkulka sarreeya, waxaa jira qayb ballaadhan oo u dhexeeya mashiinka iyo isku-xidhka magnetka, oo sameeyay laba wareeg oo madax-bannaan.
9.Haddi aad shaqeyneyso, mishiinka mashiinka mashiinka magnetic-ka wuxuu si otomaatig ah isugu dheelitirayaa awooda Haydarooliga, riixida disiga kaliya wuxuu qaadaa riixitaanka foosha degdega ah marka bamka uu bilowdo oo istaago.
Hore: MZF Magnetic Drive saar
Xiga: MMC Mashiinka Wadista Mashiinka